​गायकभन्दा परिवार प्राथमिकतामा प-यो– पुष्पा पौडेल, गायिक
१७ फाल्गुन २०७३
बाल्यकालदेखि नै उनमा गायिका बन्ने रहर थियो । त्यही सपना पूरा गर्न सन् २०१० को नेपाली तारा गायन प्रतियोगितामा भाग लिएकी पुष्पा पौडेल टप १० भित्र पर्न सफल भइन् । मेहेनतपछि गायनमा सफल भइन्, करिब ७० गीत रेकर्ड गरिसकेकी छिन् । तर पछिल्लो समय उनी गायन क्षेत्रबाट अलि टाढा छिन् । कलेज पढाउने उनी पारिवारिक जीवनमै रमाएकी छिन् । आखिर निकै गायनको करिअरलाई उनले बीचैमा… विस्तृत समाचार
​रंगमञ्चमा आत्मसन्तुष्टि छ-प्रेमवर्षा खड्का, कलाकार, रंगमञ्च सिनेमा
प्रेमवर्षा खड्का रंगमञ्चको दुनियाँमा मेहेनत गर्दै गरेकी कुशल कलाकार हुन् । विगत चार वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेकी पे्रमवर्षाले नौवटा नाटक गरिसकेकी छिन् । यस्तै, दुई चलचित्रमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन् । यही क्षेत्रमा भविष्य खोज्ने निश्चित गरेकी उनै प्रेमवर्षासँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ः रंगमञ्चमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ? नाटक खेल्ने सानैदेखिको रुचि थियो । त्यो रुची झांगिँदै गयो र अहिले रंगमञ्चमा पुगेँ… विस्तृत समाचार
सामान्य जीवनशैली मै मिठास छ- लक्ष्मी योङहाङ, मोडल, कलाकार
कला क्षेत्रमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्नुभयो ? मिस लिम्बू २०१५ मा सहभागिता जनाएदेखि कलाकारितामा मेरो प्रवेश भएको हो । कला क्षेत्रको मोहले किन तान्यो ? कसको प्रेरणाले लाग्नुभयो ? बाल्यकालदेखिनै कलाकारिताको मोह त थियो, तर गाउँ घरमा सम्भव थिएन । जब राजधानी प्रवेश गरेँ अनि मिस लिम्बूमा सहभागी भएँ । ‘युमा कल्चर अवार्ड’ जित्न सफल भएँ । त्यसपछि मिस मंगोलमा भाग लिएँ । त्यसपछि कलाकारिताको मोह… विस्तृत समाचार
​केटाहरुलाई हाँसेरै उडाइदिन्छु- एलिसा राई, नवनायिका
अहिले निकै चर्चामा रहेको लुट २ चलचित्रको ...लाइदेउन चोखो पियार... भन्ने गीत जति चर्चामा छ, त्यति नै चर्चामा छिन यस गीतकी कलाकार एलिसा राई पनि । यतिखेर उनलाई फिल्ममा अफर गर्नेहरुको घुइचो छ । उनको कामको मुल्याकन गर्नेहरुको भीड छ । कुन चलचित्र गर्ने र कुन नगर्ने उनी अन्योलमा छिन । ६० भन्दा माथि म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी र सट मुभिजहरुमा अभिनय गरीसकेकी एलिसा बाल्यकालदेखि… विस्तृत समाचार
​कामप्रति गर्व लाग्छ- बेनिशा हमाल, नायिका
१७ माघ २०७३
चलचित्र उद्योगमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेकी नायिका हुन् बेनिशा हमाल । कला कर्मलाई पेशा बनाएकी बेनिशा कसैको निगाहभन्दा आफ्नै क्षमताको दममा आज यो स्थानमा पुगेकी हुन् । म्युजिक भिडियोमा होस् या सिनेमामा उनले आफूलाई सधैँ अब्बल सावित गरेकी छन् । स्वरडेब्यु बेनिशा राम्रो स्क्रिप्ट राइटरका रूपमा पनि चिनिन्छिन् । उनीसँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ः यतिबेला के गरिरहनुभएको छ ? खासै नयाँ काम केही गरेकी… विस्तृत समाचार
​थिएटरको काम नै मनपर्छ– मेनुका प्रधान, नायिका
सानैदेखि अभिनयमा रुचि राख्ने चितवनकी मेनुका प्रधान अभिनयलाई आफ्नो शौखको रूपमा लिन्छिन् । ‘एकदिन एकरात’बाट ठूलो पर्दाको चलचित्रमा प्रवेश गरेकी मेनुकाले भिजलान्ते, उस्सर्व, भिसा गर्ल, भेलेन्टाइम, रेशम फिरिरी रातोघर, पुरानो ढुंगामा अभिनय गरिसकेकी छिन् । यिनलाई हरेक प्रकारको अभिनय गर्ने सौख छ । थिएटरदेखि ठूलो पर्दाको चलचित्रसम्म आइपुगेकी उनै नायिका मेनुका प्रधानसँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ः पछिल्लो समय अभिनयमा कम देखिन थाल्नुभयो नि ?… विस्तृत समाचार
​मन पराउने हजार छन्- सुरक्षा पन्त, नवनायिका
४ माघ २०७३
सानैदेखि चलचित्रको रंगिन दुनियाँमा उत्रने मोह थियो, सुरक्षा पन्तको । परिवार भने उनलाई इन्जिनियरि बनाउन चाहन्थ्यो । त्यसैले शिक्षा त्यतैतिर मोडियो । अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं आएपछि बाल्यकालको त्यो मोहमा उकेरा लाग्दै गयो । केही टेलिभिजन च्यानलका पर्दामा उनी करियर बनाउन थालिन् । तर, त्यो पाइला, त्यतिमा रोकिएन । बाल्यकालको त्यो मोह त्यतिबेला वास्तविकतामा परिणत भयो, जतिबेला ‘अझै पनि’ नामको चलचित्रबाट उनी सेतो पर्दाको रंगिन दुनियामा… विस्तृत समाचार
​कलाकार राज्यबाट उपेक्षित छन्– ज्ञानु राना, वरिष्ठ गायिका
ज्ञानु राणा, नेपाली संगीतिक क्षेत्रको एउटा विराट प्रतिभा, एक मुर्धन्य स्रष्टा । कुनै परिचयको आवश्यकता नपर्ने नाम । कयौँ अजर, अमर, कालजयी गीत छन्, यिनको नाममा । यिनको कोकिलकण्ठबाट मन्त्रमुग्ध नहुँने सायदै कोही होला । ३५०० भन्दा बढी आधुनिक, लोक र भजनमा आवाज भरेकी गायिका राणा अहिले ललितकला क्याम्पसमा लोकगीतसम्बन्धी परीक्षा दिने काममा सक्रिय छन् । बाबु धर्मराज थापाको प्रेरणाले बाल्यकालदेखि गायन क्ष्ँेत्रमा लागेकी ज्ञानु… विस्तृत समाचार
स्वर्ण जित्दा मनोबल बढेको छ-पुनम रावल, बक्सिङ खेलाडी
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाल आर्मी क्लबको वर्चस्व रह्यो । आर्मीले बक्सिङमा धेरै स्वर्ण जित्यो । बक्सिङतर्फ आर्मीलाई स्वर्ण दिलाउनेमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहिन् पुनम रावल । भरखर १९ वर्ष पुगेकी पुनमको बाजुरादेखि राष्ट्रिय स्वर्णसम्मको यात्रा कम रोचक छैन । स्वर्ण पदक जित्दा कस्तो अनुभूति भयो ? मैले कुनै पनि खेलमा पदकबिना फर्किनुपरेको छैन । तर, यसपालि सिंगो आर्मी क्लबले जित्यो । प्रधानसेनापतिज्यूसमेत खुसीले नाच्नुभयो,… विस्तृत समाचार
​बच्चाको मायाले फिल्म छाडें- मेलिना मानन्धर, नायिका
नृत्यमा सोख राख्दाराख्दै रजतपटमा पाइला टेकेकी मेलिना मानन्धर पछि चर्चित नायिका बनिन् । दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्रहरु तथा विभिन्न म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी उनी विवाहपछि भने चर्चामा छैनन् । आठ वर्षको लामो ‘ग्याप’पछि चलचित्र ‘रोमियो’ मार्फत् रजतपटमा फर्किएकी उनै मानन्धरसँग रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ः विवाहपछि सिने क्षेत्रमबाट लामो समय हराउनुभयो नि ? हो, तर चलचित्र छोडेको चाहि‘ भन्न मिल्दैन । घरायसी कामकाजमा नै व्यस्त… विस्तृत समाचार